बलिउडका सबैभन्दा धनी ५ अभिनेत्री, वर्षमा कति कमाउँछन् ? – ramechhapkhabar.com
बलिउडका सबैभन्दा धनी ५ अभिनेत्री, वर्षमा कति कमाउँछन् ?
मुम्बई, १६ चैत्र ।
बलिउडमा अभिनयबाट कमाउने कलाकारको कुरा हुँदा सधैं हिरोको नाम आउँछ । जस्तो कि आजभोलि अक्षयकुमार फोब्र्सको लिस्टमा सबैभन्दा कमाउने हिरोको रुपमा सामेल हुँदै आएका छन् । यसैगरी यो लिस्टमा शाहरुख खान र सलमान खान पनि अटाउने गरेका छन् ।
तर, अभिनेत्रीले भने फिल्म खेलेकै भरमा फोब्र्सको लिस्टमा अहिलेसम्म ठाउँ बनाउन सकेका छैनन् । बलिउडका प्रियंका चोपडा र दीपिका पादुकोनले आजभोलि हलिउड फिल्म पनि गरिरहेका छन् तर पनि तिनको कमाइ फोब्र्समा स्थान बनाउन पर्याप्त भएको छैन ।
बरु प्रियंकाले सबैभन्दा शक्तिशाली महिलाको विधामा भने एकाधपटक ठाउँ पाएकी छिन् । तर, वर्षेनी कमाउने अभिनेत्रीको कुरा गर्ने हो बलिउडमा अरु नै अभिनेत्री पहिलो नम्बरमा छन् । अमर उजालाले गरेको संकलनमा सबैभन्दा कमाउने अभिनेत्रीको रुपमा ऐश्वर्या राय पहिलो नम्बरमा छिन् । हेरौं यो लिस्टमा अरु को को छन् ।
हुन त ऐश्वर्या रायले धेरै भयो फिल्ममा अभिनय गरेकी छैनन् । उनले पछिल्लो समय अभिनय गरेको ‘ए दिल है मुस्किल’ नै रिलिज भएको नै ५ वर्ष पुगिसक्यो । तर, पनि ब्रान्ड र उनले गर्ने अन्य कामबाट उनले वर्षेनी ३८ करोड कमाई गर्ने गरेकी छिन् ।
काजोल अभिनयमा ऐश्वर्याभन्दा थोरै सक्रिय छिन् तर उनले जति फिल्ममा काम गरेकी छिन् कि त घरकै फिल्म छन् कि त आर्ट हाउस फिल्म छन् । भर्खरै लघु फिल्म ‘देवी’बाट फिल्मफेयर अवार्ड जितेकी काजोल गतसाल ‘तान्हाजी’मा देखिएकी थिइन् । योबाहेक ब्रान्ड इन्डोर्समेन्टमा समेत सक्रिय काजोलले वर्षेनी २० करोड कमाइ गर्ने गरेकी छिन् ।
३. दीपिका पादुकोन
बलिउडमा सर्वाधिक कमाई गर्ने लिस्टमा दीपिका पादुकोनको नाम छुट्ने त कुरै भएन । ‘ओम शान्ति ओम’बाट डेब्यु गरेयता उनको करिअर थामिएकै छैन । हाल रनवीर सिंहसँग विवाह गरेकी दीपिकाको वार्षिक कमाई ५२ करोड रहेको छ । उनले ‘पद्यावत’मा रनवीर सिंह र शाहिद कपुरले भन्दा बढ्ता पारिश्रमिक लिएको चर्चा थियो ।
४. करिना कपुर
करिना कपुरले विवाह गरेर दुइटा बच्चासमेत जन्माइसकिन् तर बलिउडमा उनको माग कम छैन । सैफअलि खानसँग विवाह गरेकी करिनाले भर्खरै दोस्रो बच्चालाई जन्मदिएकी छिन् तर त्योभन्दा अघि करिना ‘जुग जुग जियो’को सुटिङ गरिरहेकी थिइन् । उनले विज्ञापन र फिल्म गरी वर्षेनी ४० करोड कमाई गर्ने गरेकी छिन् ।
बलिउडबाट निस्किएर हलिउडमा जम्ने प्रयास गरिरहेकी प्रियंका चोपडा आजभोलि बलिउड फिल्म खेल्दिनन् तर पनि विज्ञापनमा भने प्रशस्तै देखिन्छिन् । फाट्टफुट्ट खेलेका फिल्म र विज्ञापनबाट उनले ४५ करोड कमाई गर्ने गरेकी छिन् । प्रियंका पछिल्लो समय ‘स्काई इज पिंक’मा देखिएकी थिइन् ।